Blogging တြိဂံ - အောင်မြင်မှု၏အချက် (၃) ချက် Martech Zone
ဘလော့ဂ်သုံးတြိဂံ - အောင်မြင်မှု၏ ၃ ချက်
ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 8, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ငါအလုပ်လုပ်နေတယ် ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်အပေါ်ငါ့တင်ဆက်မှု ဒီအပတ်။ The ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘော်ရီဂျင်နီနှင့်ပတ်သက်။ ယနေ့စာအုပ်ဆွေးနွေးမှု တကယ်တော့ငါ့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ငါ့ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်သင့်တဲ့အတွေးတွေကိုတကယ်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ရဲ့အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုငါသွားဆွေးနွေးမယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာရှိတဲ့လူအများစုကဘလော့ဂ်ရေးချင်ကြလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ သူတို့ကိုငါကဒီနည်းလမ်းနဲ့မပြောချင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုငါထုတ်ချင်တယ်။ ငါ Blogging တြိဂံ: အောင်မြင်သော Blogging ၏3Element တွေကိုတင်ပြ။
အကြောင်းအရာ - ဤသည်မှာသင်၏ဘလော့ဂ်ကိုတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ဖုံးကွယ်လိုသောအကြောင်းအရာများအားတသမတ်တည်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာသောဆွေးနွေးမှုများ။
စှဲလနျးခွငျး - ငါစိတ်အားထက်သန်မှုသည်ကူးစက်တတ်သည်ဟုယုံကြည်သည် သင်သည်သင်၏ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုရေးသားခြင်းတွင်စိတ်မ ၀ င်စားပါကစာဖတ်သူများသည်သင့်အားကြည့်ရှု။ လျင်မြန်စွာထွက်သွားလိမ့်မည်။
အရှိန်အဟုန် - blog တစ်ခုသည် entry တစ်ခုနှင့်မပေါက်ပါ။ သင်၏စာဖတ်သူများ၏မျှော်လင့်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်စာဖတ်သူအသစ်များကိုဆွဲဆောင်ရန်အရှိန်အဟုန်လိုအပ်သည်။
Flame သင်္ကေတသည်သင်၏ပါဝင်မှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အရှိန်အဟုန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောမီးလျှံကိုကိုယ်စားပြုသည်။ [Update] မီးလျှံသည်သင်၏စာဖတ်သူများနှင့်မှတ်ချက်များနှင့်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ချက်များမှစတင်သောဆွေးနွေးမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သင်၏စာဖတ်သူများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သင်၏စကားလုံးပျံ့နှံ့ခြင်း။
ဒီဟာကိုလုပ်ဖို့နောက်ထပ် ... ငါမင်းရဲ့အကြံဥာဏ်တွေကိုနားထောင်ချင်ပါတယ် Blogging Triangle။ ပုံကိုသုံးပြီးစာဖတ်သူများနှင့်လည်းဆွေးနွေးပါ။ ငါသည်သင်တို့၏တုံ့ပြန်ချက်ကိုမျှော်လင့်!
ထိုအခါငါ Illustrator နှင့်အတူအားလုံးပုံဥပမာကိုပြု၏! The bittbox အကြံပေးချက်များကိုချွတ်ပေးဆောင်ကြသည်!
မတ်လ 9, 2007 မှာ 12: 27 AM
အကြောင်းအရာ ၁ ကိုဘယ်လိုချိုးဖောက်မယ်ဆိုတာငါစိတ်ဝင်စားတယ်။
ထို့အပြင်ထိုအကြောင်းအရာ (နှင့်ပြသခြင်း / ပုံစံချခြင်း) သည် RSS feed မှတဆင့်မည်သို့ဘာသာပြန်သနည်း
မတ်လ 9, 2007 မှာ 9: 16 AM
မင်္ဂလာပါစတီဗင်! သေချာတာပေါ့ - ဒီဇိုင်းကကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္playsကနေပါဝင်ပါတယ် ငါအဲဒီအကြောင်းနည်းနည်းလောက်ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာရေးခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကဒီနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်လိုဆိုဒ်တစ်ခုလိုလောက်မများပါဘူး ကျန်းမာသောဝဘ်ဒီဇိုင်း.
မတ်လ 9, 2007 မှာ 1: 19 AM
အကြောင်းအရာနှင့်တကွသင်မှလှုံ့ဆော်မှုရရန်ခေါင်းစဉ်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုဗဟုသုတရှိရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်ဟာလိုအပ်တဲ့ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုဆက်ထိန်းထားမယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်ကူလှတဲ့အတွေးအခေါ်များအမြဲရှိရမယ်။
ငါဘာမှမဖွင့်လို့မရဘူးဆိုရင်အဲဒီအချိန်ကာလအတွက်ချက်ချင်းမလိုအပ်တဲ့ပို့စ်များကိုငါစာရင်းပြုစုထားတယ်။ ငါ post ကိုသူ့ဟာသူစာမရေးရင်တောင်မှဒါဟာအရာအရာအားလုံးကိုရွေ့လျားထိန်းသိမ်းထားဖို့ကူညီပေးသည်။ အကြောင်းအရာများရေးသားရန်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုသာလိုအပ်သည်။
မတ်လ 9, 2007 မှာ 9: 23 AM
ငါသဘောတူပြီးသင့်ရဲ့အစွန်အဖျားကိုချစ်! ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုသောဘလော့ဂ်ရေးရန်လိုအပ်ကြောင်းသိသောကြောင့်မူကြမ်းတွင်အကြောင်းအရာများသိမ်းဆည်းထားလေ့ရှိသည်။ ဒါဟာအရှိန်အဟုန်နှင့်အတူကူညီပေးသည်!
မတ်လ 9, 2007 မှာ 3: 50 AM
မတ်လ 9, 2007 မှာ 9: 19 AM
ဟုတ်ပါတယ်၊ တကယ်ပဲ…နယ်ပယ်သုံးခုကိုအာရုံစိုက်ခြင်းကသင့်ဘလော့ဂ်ကိုအောင်မြင်မှုတွန်းအားပေးနေသည်။ ငါရှေးရှေးကိုကြိုးစားဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အဓိကကျတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဘလော့တစ်ခုရေးတာက ၂ ဖက်မြင်မဟုတ်ဘူး။ အကြောင်းအရာကိုရယူခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုသည်မလုံလောက်ပါ။ သင်အရှိန်အဟုန်ကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်ဟူသောအချိန်ကာလတစ်ခုပါလာသည်။
(လူတိုင်းအတွက်) ဒီတုံ့ပြန်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်၏ရှုထောင့်ကကူညီသည်!
မတ်လ 9, 2007 မှာ 9: 52 AM
ပုံကိုကြိုက်တယ်။ အထူးသဖြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်နံပါတ် ၂ ဖြစ်သည်။
မတ်လ 9, 2007 မှာ 10: 37 AM
ငါအကြောင်းအရာကြောင်းအရေးအပါဆုံးဒြပ်စင်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ လူများအားသင်တင်ပြသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်သင်လုပ်နိုင်သည်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ အချိန်တန်မှမှန်ကန်သောခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အသုံးဝင်သည်။
မတ်လ 9, 2007 မှာ 11: 00 AM
ကျွန်ုပ်သည် Google Ad-words ကိုနှစ်သက်ပါတယ် သင်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်သည့်တြိဂံတွင်၊
ပဲရစ်ဟီလ်တန် > ပုံ၊ နောက်ခံ၊ ဗီဒီယိုအတင်းအဖျင်း၊ ဘလော့များ၊ Fanfare
စိတ်ဝင်စားဖွယ်… (ဆိုလိုသည်မှာ lol)
မတ်လ 9, 2007 မှာ 6: 07 pm တွင်
မီးတောက်ဟာကျောက်ပုစွန်မဟုတ်တဲ့အလားကြည့်ဖို့ဂရပ်ဖစ်ကိုငါ update လုပ်ခဲ့တယ်။
18:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 10
ဒီတြိဂံကိုနှစ်သက်ပြီးဒီ post ကိုဒီနေ့ပို့စ်ကမှုတ်သွင်းပေးပါတယ်